कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव गर्दा पनि उत्साहित भएनन् लगानीकर्ता
सातामा १४.२० अंक घट्यो नेप्से
कात्तिक २३, काठमाडौं । सातामा १४ दशमलव २० अंकले नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको छ ।
अघिल्लो साताको बिहीवार र यस साताको बिहीवारको तुलनामा सो अंकले नेप्से परिसूचक घटेको हो । अघिल्लो साता तिहार पर्वका कारण कात्तिक १४ गते एक दिन मात्र शेयर कारोबार भएको छ ।
सो दिन ३ दशमलव १७ अंक घटेर नेप्से परिसूचक १ हजार १४६ दशमलव १७ विन्दुमा बन्द भएकोे थियो । यस साताको बिहीवार परिसूचक ६ दशमलव शून्य ५ अंक घटेर १ हजार १३१ दशमलव ९७ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस वर्षको लागि शेयरधनीहरुलाई आकर्षक लाभांश दिंदा पनि लानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छैेनन् । बजार घटेर निकै तल आएकाले पनि लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
यस सातामा भने परिसूचक ७ दशमलव ३२ अंक घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतवार १ हजार १३९ दशमलव २९ विन्दुबाट शूरु भएको परिसूचक बिहीवार १ हजार १३१ दशमलव ९७ विन्दुमा बन्द भएको हो ।
साताको पाँच कारोबारको अवधिमा रू.१ अर्ब २३ करोड २२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सातामा सबैभन्दा बढी बिहीवार रू. ३७ करोड ४१ लाख ५० हजार बराबरको कारोबार भएको हो । सातामा रू.१७ करोड ५५ लाखदेखि ३७ करोड ४१ लाखसम्म दैनिक कारोबार भएको छ ।
सातामा रू. १४ खर्ब ३७ अर्ब बराबरको बजार पूँजीकरण भएको छ । सातामा १६३ कम्पनीको ४६ लाख ५० हजार २५८ कित्ता शेयरको कारोबार भएको छ । सातामा सबैभन्दा बढी रसुवागढी हाइड्रोपावरको १ हजार ४९९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
दोस्रोमा साञ्जेन जलविद्युतको १ हजार २६९, प्रभु बैंकको ९९४, एनएमबि बैंकको ९७१, नविल बैंकको ६६२, नेपाल बैंकको ५४२, अपर तामाकोशीको ५०९, चिलीमे हाइड्रोपावरको ४७१, मेगा बैंकको ३९२ र सबैको लघुवित्तको ३७२ कित्ता शेयरको खरीद विक्री भएको छ ।
सातामा आठ वाणिज्य बैंकहरुको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । पहिलोमा प्रभु बैंकको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । दोस्रोमा एनएमबि बैंकको कारोबार भएको छ ।
सातामा सर्वाधिक बजार पुँजीकरण भएका कम्पनी
गत साता सर्वाधिक बजार पुँजीकरण नेपाल दूरसंचार कम्पनीको रहेको छ ।
यस्तै नविल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन बैंक, लगायत एनएमबी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र कृषि विकास बैंकको बजार पुँजीकरण बढी रहेको छ ।
सातामा ओम डेभलपमेण्ट र एनएमबि बैंकको मर्जर पछि नेप्सेमा एकिकृत शेयर सूचीकृत भएको छ । मर्जरपछि नेप्सेमा १ करोड ९१ लाख १५ हजार ७९० दशलमव ५६ कित्ता शेयर सूचीकृत भएको छ ।
सातामा ६ कम्पनीले लाभाँंश प्रस्ताव गरेका छन् । कम्पनीहरुको कात्तिक १७ गते बसेको संचालक समितिको बैठक र कत्तिक २० गतेसम्मको बैठकले यस वर्षको लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
लाभांश प्रस्ताव गर्नेमा लक्ष्मी बैंक, नविल बैंक, सहयोगी विकास बैंक, गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स, नयाँ नेपाल लघुवित्त र सिभिल बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् ।